Knits at esiqongweni ukuthandwa. Manje ababona abantwana kuphela kabani ogogo ukwazi ukuluka ngensonto, kodwa onobuhle eziningi noma osaziwayo. Abaklami uthande umphelelisi wathungela noma crocheted lesikhumba izakhi. Ngakho-ke, lesi sithako wathungela izingcezu - lena umbuzo obalulekile ukuthi kamuva ngokushesha noma silindelwe zonke isisebenzi onekhono. Ngaphandle kwale akunakwenzeka ukuxhumanisa ingubo noma ijezi. Futhi kukhona izindlela eziningi uxhumano. Nokho, eziningi ngokuyisisekelo.
Ngosizo okuyinto ungakwazi obumbene?
Ukwaluka - ukudalwa imikhiqizo usebenzisa izindikimba, emapheshana noma ukuvala, usebenzisa izinaliti, izingwegwe noma kwamanye amadivaysi. Ngokuyinhloko Ukwaluka lahlukaniswa izinhlobo:
Yiqiniso, kukhona ukunitha umshini nokukhiqizwa kwemikhiqizo usebenzisa bobbins, kodwa abaqiniseki ezithandwayo, futhi abazi konke. Kodwa uxhumano izingxenye wathungela kudingekile noma luphi uhlobo lokhu ezihlukahlukene ngenalithi.
Uxhumano ngokwayo zingenziwa ngokusebenzisa lokuluhlaza nangebala ukushuba njengalezo ezazisetshenziswa ngayo kulesi sihloko. Nokho, ngezinye izikhathi kombala nekuphikisana, uma ngokuvumelanayo bafakwe ngomklamo wezinto. Futhi, kwabanye ezivuzayo ezifihliwe kungaba agxumeke imicu on ohlabayo ngobukhulu kuka main.
Yini okudingeka uyenze ngaphambi thunga umkhiqizo?
Ngaphambi kokuqhubeka ngqo ukuxuba imininingwane umkhiqizo, kufanele ngaphansi uchungechunge nezinqubo. Ngokwesibonelo, zonke izingxenye kufanele ibe bushelelezi, ukuphoqelela kubo material mncane eyenziwe ukotini phezu kakade hamba yensimbi. Lokhu kukuvumela ukuba ubone ubukhulu esiqondile izingxenye, kanye unikeza umbono best of the iphethini.
By the way, kuzomele ufunde ngokucophelela ulwazi ilebula ntambo. Ezinye izinhlobo izindikimba ungumlutha kungaba ngenxa kushunqe, ngakho kulesi simo 'umnkantsha yensimbi yensimbi kuphela. Kungenjalo kukhona ingozi yokonakalisa nomkhiqizo.
Kubalulekile yokuqothulwa ngokucophelela ingxenye siphelile kakade izinto wathungela, fihla ezivuzayo noma izindikimba ophumile, uma ikhona. Kungcono yonke inqubo ngenhla kwenziwa imininingwane esethwe ku amakhadibhodi noma izicubu ngosizo izikhonkwane. Iphinde kusiza ungalahlekelwa lutho.
Izinhlobonhlobo yaseZimbabwe ngoba kwakwakhe
Compound wathungela izingxenye kungase kwenziwe amathuluzi ezahlukene ezikhona. Lezi zihlanganisa:
ukuthunga izinaliti - ubungako bawo kunqunywa esekelwe ukujiya ntambo;
Njengoba sinazo zonke lezi namathuluzi ngenalithi zingahlanganiswa ibe umkhiqizo olulodwa, izingcezu zihlakazeke. Nokho, ukusebenza emalungeni kulokhu zizohluka.
Ezivuzayo abathola isahlulelo nezinsimbi ezahlukene futhi, ngokufanelekile, anamagama ahlukene. Ngokwesibonelo, ekhuthaza ethandwa wathungela izinto ngodobo - chain Stitch. Buciko eziningi ongakhetha ezivuzayo kukhicite inaliti usebenzisa Yenaliti - ehlombe.
Compound wathungela hook izingxenye
Chain Stitch, njengoba sekushiwo, omunye ethandwa kakhulu phakathi izisebenzi ezinekhono, asetshenziswa ngubani ukwenza imikhiqizo ngosizo nje hook.
Ngenxa yalesi ingxenye umkhiqizo ofuna ukuba babe nobuhlobo obuseduze, ehlanganiswe, ubuso nanye ingxenye phesheya okufanayo. Ngemva kwalokhu hook wababhokoda bobabili imininingwane, futhi intambo uboniswa. Khona-ke iqala nemigoqo ukunitha, ngaphandle sc. Kulokhu, intambo kufanele some, ukushiya kungekho izikhala. Kodwa kuyiqiniso futhi kuwufanele ngokugcina iso imininingwane futhi azihloselwe, futhi ekhululekile, akazange ashintshe Ubukhulu yayo yasekuqaleni.
Ehlombe umphetho: ukusetshenziswa spokes
Omunye emalungeni ethandwa kakhulu, okuvumela ukuba wenze uxhumano izingxenye spokes wathungela - ihlombe. Lokhu umphetho like craftswomen ngoba kuqinisekisa imikhiqizo bushelelezi onqenqemeni. Futhi-ke okuhlala isikhathi eside.
Ukuze uqale inhlangano izingxenye usebenzisa spokes kumelwe obumbene uchungechunge ezimbili ezengeziwe futhi. Futhi ungasebenzisa intambo ukotini, okungafani umbala. Lokhu akuthinti izinga umkhiqizo. Khona-ke wasusa zonke izihibe nge izinaliti, kanye nomkhiqizo uqobo ngobunono proutyuzhivaetsya.
Omunye imigqa eyengeziwe badlulela. In the yesibili, susa nje eyodwa iluphu, ngaleyo ndlela ukusondelana leso sikhala wathungela Stitch. Plus uxhumano zezitho sihloko nobumbene loop main akusho deform.
Stitch obumbene - eyintandokazi eyinhloko eziningi
Kodwa iningi amakhosi namanje zisebenzisa ngenaliti yokuthunga ukuxhuma emaphethelweni komkhiqizo. Lolu hlobo umphetho zingahlukaniswa ngamaqembu amabili - mpo futhi enezingqimba.
Stitch Xhuma izingxenye crocheted obumbene iqala neqiniso ukuthi wazi engenhla eziningi ishiywa ingamboziwe. Inalidi ufakwa iluphu lokuqala eziningi phezulu. Isiphetho senziwa kumjikelezo olandelayo umkhiqizo ofanayo, kodwa kusukela phansi kuze. Ukusebenza efanayo Kwenziwa futhi engxenyeni umkhiqizo wesibili. Futhi ugcwalise uxhumano kuzo zonke chungechunge. Ngenxa yaleli lungiselelo, omhlophe webhola ongabonakali. Wayebonakala ukuba kufihlwe ngaphakathi umkhiqizo.
Kukhona okuhlukile lapho Stitch obumbene wenziwa ku umkhiqizo nge izihibe avaliwe. Sebenzisa intambo nombala ofanayo kanye ukuthungwa njengoba umkhiqizo ngokwayo. Inqubo ephelele wenziwa ngendlela efanayo njengoba uma kuxhunywa izingxenye nge side evulekile. Nokho, kuthatha inaliti ucacise bafake kube umgogodla, bezama ukuthola kumjikelezo.
ngezinye izikhathi okubhekiselwa kuzo nangokuthi i wathungela umphetho uxhumano. He kubhekwa omunye elula. It livame ukusetshenziswa uxhumano lateral. Uma le inaliti ufakwa izihibe emaphethelweni womabili imikhiqizo ngesikhathi esisodwa, bese yaseZimbabwe ezincane ukukhiqiza elibona nxazonke emaphethelweni komkhiqizo. Qinisa intambo kufanele kube kahle ezihambisanayo. Uma ukwenza umphetho ngokuhlanganyela ohlangothini front, ungalungisa umdlalo umbala noma iphethini nhlangothi zombili komkhiqizo. Nokho, ohlangothini reverse umthungo kubukeka kwenetha futhi obunganakekile.
Yamaha Virago: izithombe, izibuyekezo, ukubuyekeza, Ukucaciswa
Ziyisivikelo Karate. Bangaki amabhande e-karate. Meaning of izimbali
Indlela ukususa izikhwama phambi kwamehlo ekhaya?
Kungani ngidinga ukuthatha ukuhlolwa igazi for hormone yegilo?